Warbixin “Djibouti waa wadada hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya yimaada”. – Hornafrik Media Network
Warbixin “Djibouti waa wadada hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya yimaada”.
By HornAfrik	 On Sep 17, 2018
HornAfrik-Warbixin uu baahiyay warbaahinta la yiraahdo Radio France International ayaa lagu sheegay in dalka Jabuuti oo Soomaaliya daris la ah uu soo maro hub lagu tilmaamay inuu sharci darro yahay oo la keeno dalka Soomaaliya.
Warbixintaan oo la sheegay in laga soo xigtay shirad sirdoon oo ka faaloota arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha Africa oo magaceeda la yiraahdo EXX Africa ayaa waxaa si gaar ah loogu gorfeeyay xogo la ururiyay oo la xariira in maraakiib iyo doonyo sida hub aan sharci aheyn ay ku xirteen dekadaha dalka Jabuuti kadibna si suuq madow ah loogu soo gudbiyay Soomaaliya.
Xigasho- Radio France International (rfi)
Waxaa tarjumay Burhaan Diini Faarax
Shirka Golaha Amniga Qaranka oo dib u dhacay.
Wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliya oo war ka soo saartay khilaafka Galmudug.